I-NORD HOUSE-INDAWO EZELE YIMVELO-
Yonwabela indlela yokuphila eco-friendly ehambelana nembonakalo yeHokkaido kunye nendalo!
Unokuvuka kusasa ngelizwi leentaka zasendle.
＊Ukuba ungathanda ukuzingela iziqhamo (zihlawuliswe), nceda uqhagamshelane nathi kwangaphambili. (Ukususela ekuqaleni kukaJulayi ukuya kuSeptemba)
＊Nceda uqhagamshelane nathi kwangaphambili ukuba unqwenela izifundo zeentyatyambo (zihlawulwe).
＊I-Sori ifumaneka simahla ebusika.
＊Imizuzu engama-30 ngemoto ukuya kwindawo yosapho yokutyibilika ekhephini.
Kukho i-NORD2 3minutes yokuhamba ukusuka kwindawo yabahambi.
Le ndlu yindlu yeentsapho ezimbini. Nceda usebenzise loo (4DK) ngokukhululekileyo.
Kukho ibhedi ephindwe kabini kwigumbi lokulala eli-1, kwaye kukho iibhedi ezimbini zomntu omnye kwigumbi lokulala eli-2.
Kukho indawo kwigumbi lokuhlala apho iifutons ezi-1 zolekwe.
Izixhobo zasekhitshini (Izinongo, iimbiza, iimbiza zodongwe, izitovu zokupheka eziphathwayo, irayisi yeManji (yaMahla), izipheki zerayisi, izitovu ezitshisa ezi-2, ii-oveni zemicrowave, iithowusta, iifriji, izixhobo zetafile, ikofu, iti, njl. njl.) ubuncinane zixhotyiswe ngokupheleleyo.
・ Itawuli yokuhlambela, itawuli, ishampu, isepha, ibhrashi yamazinyo, into yokuhlamba impahla, iphepha lasekhitshini, isomisi
・ Iikomityi zekofu, iimagi, iiglasi zewayini, iiglasi, iimela ze-sommelier, iifolokhwe kunye neemela, izinti, izixhobo zetafile
・ ITV, iNETFLIX, iAppleTV, umatshini wokuhlamba, ihanger
Indlela yemaple edlula kwindawo enenduli edibanisa i-Iwamizawa kunye neYubari.
Kukho ii-apile, iicheri, iidiliya njl.njl
Ukudlula kwiintaba ezinzulu kwilali yeentaba njengeMoomin Valley, udlula kwi-800 yeemitha ukuphakama kwindawo ephakamileyo, indlela ekhokelela eYubari apho i-Showa nostalgia ihleli yeyona ndlela ingcono yokuqhuba.
Sifanele ukuba yindawo engcwele yokukhwela ibhayisekile apho iibhayisekile ezininzi zidibana khona.
Izilwanyana ezininzi zihlala kwilali yaseManji. ※ (inja yerakhoni, impungutye, EzoSquirre, Shimaneega(A. c. japonicus), Hototogisu(Lesser cuckoo), iheron, ibhere elimdaka, ukhozi olukhulu lwesikhumbuzo sendalo njl. Ukuba udibana nesilwanyana unethamsanqa ︎)
Kufuphi ungakonwabela ukuhamba kwizikali ezimangalisayo, njengeCape Mountain Forest Park.
Iintyatyambo zeCherry zihle kakhulu entwasahlobo, kwaye izityalo ezininzi zasendle nazo zinokuthathwa.
Ehlotyeni, iintyatyambo ezimibalabala ziyadubula.
Ehlotyeni kucetyiswa ukuba iziqhamo ezivela manji!
Huscup, blueberry, cherry, melon, apile, iidiliya kunye nabanye abaninzi. (Ungakonwabela ukuzingela iziqhamo)
Ikwindla ngamagqabi ekwindla, ihlathi le-larch, irayisi ye-manji.
Yonke into ivaliwe.
Yindawo enekhephu ebusika. Ukuhamba nge-snowshoe kukuvumela ukuba uhlolisise ihlathi lasebusika elizolileyo. Ungakonwabela i-backcountry skiing.
Kutheni ungandwendweli ilali yamanji njengendawo efihlakeleyo eHokkaido?
＊Andingeneleli ngasese, kodwa ndicela uqhagamshelane nam ukuba kukho into.
＊IsiNgesi sam asisihle kakhulu, kodwa ndiza kuzama konke okusemandleni am!